Ku saabsan Papernerds.de | Mabaadiida & Xaqiiqada | Waraaqaha
Waxaan nahay kuwa ugu horeeya!
Halkan waxaad ka heli kartaa shaqaalaha Papernerds.
Macaamiilkii iyo qoraagii ayaa gebi ahaanba qarsoon!
Ka faa'iideyso sannado badan oo aan khibrad u lahayn qorista tacliinta
Shirkadda Papernerds waxaa la aasaasay sanadkii 2000 waana mid ka mid ah mashaariicdii ugu horreeyay ee gudaha ee laga sameeyo waraaqaha waraaqaha ee ardayda. Inta lagu jiro waqtigan waxaan ka caawinnay kumanaan macaamiil ah inay si fiican u dhaafaan koorsooyinka, waraaqaha muddada, shahaadooyinka bachelorka iyo imtixaanada iyo inay helaan shahaadada sare ee shahaadada mastarka, shahaadada diblooma ama shahaadada dhakhtarka. Shirkaddu waa hay'ad sharci ahaan si rasmi ah u diiwaangashan waxayna mas'uul ka tahay tayada adeegyadeeda sida ku xusan sharciga Jarmalka.
Sirta iyo kalsoonida
Qandaraaska rasmiga ah iyada oo loo marayo dalabkeena. Tilmaamaha ilaalinta xogta adag. U hoggaansanaanta dammaanadda lacagta lagu soo celiyo. Taageero macaamiil oo dhameystiran.
Tayada iyo waqtiga
U hogaansanaan adag waqtiyada kama dambaysta ah ee uu dejiyey macmiilku. Hubinta dheeriga ah ee shaqada anaga oo gacanta ku hayna tayada: qaabeynta, xatooyo (dhowr barnaamijyo softiweer ah), higgaadinta, naxwaha, calaamadaha xarakaynta iyo waxyaabaha ku jira.
Adeeg iyo raaxo
Maamulaha shaqsiyeed ee macaamil kasta. Taageero ku saabsan dhammaan marinnada isgaarsiinta. Nidaam qiimo dhimis ah oo la ururiyey, dallacsiinno iyo raffaladeyaal macaamiishayada
Qandaraaska rasmiga ah iyada oo loo marayo dalabkeena. Tilmaamaha ilaalinta xogta adag. U hoggaansanaanta dammaanadda celinta lacagta. Taageero macaamiil oo dhameystiran.
Tayada iyo waqtiga. U hogaansanaanta waqtiga kama dambaysta ah ee uu dejiyey macmiilku. Dib-u-eegis dheeraad ah oo ku saabsan shaqada iyada oo la xakameynayo tayada: nuxurka, foomka iyo hawsha shaqada. Hubinta khayaanada ee dhowr barnaamij oo softiweer ah.
Adeeg iyo raaxo. Maamulaha shaqsiyeed ee macaamil kasta. Taageero ku saabsan dhammaan marinnada isgaarsiinta. Nidaamka qiimo dhimista oo la uruursaday, dallacaadaha iyo raffulada macaamiisha.
Kooxdayadu waxay ka kooban yihiin dhalinyaro, dad faraxsan oo qadarinaya hal-abuurnimada, xorriyadda gudaha, kaftanka, natiijooyinka shaqo ee wanaagsan iyo dareenka bulshada ee kooxda.
Maamulayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan taageeridda waraaqaha ardayda laga bilaabo wakhtiga amarka ee bixinta. Tababbarka xirfadeed ee socda ee qorayaasheena wuxuu dammaanad qaadayaa tayada ugu sareysa iyo qanacsanaanta macaamiisha.
Khabiiradeena takhasuska leh waxay qabtaan shaqooyin ku saabsan dhammaan mawduucyada iyo anshaxyada. Shaqaalaha ku lug leh abuurista tooska ah ee shaqooyinka waxay ka kooban yihiin oo keliya macallimiin baranaya, ardayda dhakhaatiirta, masters-ka iyo qalin-jabiyayaasha dibloomaasiga - guud ahaan qorayaasha iyagu isu aasaasay inay yihiin xirfadlayaal heerka ugu sarreeya.
Way fiicantahay inaan kulano - waan ku faraxsanahay inaan ku taageerno!
Xaqiiqooyin xiiso leh oo nagu saabsan
Celceliska da'da shaqaalaha
Koobab kafee ah ayay shaqaaluhu usbuuc kasta cunaan
shaqaaluhu waxay ku yimaadaan shaqada baaskiil
Ilaa hadda sanadkan macaamiisheennu waxay heleen hadiyado
Waxaan u bixinnaa dhirteenna magac
Hiwaayadaha ugu caansan waa muusig
Miyaad jeceshahay inaad wax badan ka barato qorista ghost?
Faahfaahin intaa ka badan halkan ka hel!